Telegram ICO atụmatụ - Blockchain News
Telegram ICO atụmatụ
Telegram ezube multi-ijeri dollar ICO maka chat cryptocurrency
Ezoro ezo ozi mmalite Telegram ezube ẹkedori ya blockchain n'elu ikpo okwu na nwa afọ cryptocurrency, powering ego na ya chat ngwa na karịrị. Dị ka multiple isi mmalite nke gwara TechCrunch, na "Telegram Open Network" (ton) ga-enwe ọhụrụ, 'Ọgbọ nke atọ' blockchain na elu ike, mgbe Bitcoin na, mgbe e mesịrị, Ethereum meghere ụzọ.
The igba egbe ga-kwụrụ ụgwọ na nnukwu ihe mbụ Mkpụrụ ego Ịchụ, na forthcoming onwe tupu ahịa sitere na n'ime ọtụtụ narị nde, nwere ike na-eme ya otu n'ime ndị kasị ibu ICOs ụbọchị. Ina a na-chụpụrụ site na eziokwu na kama ICO na-abịa site a ọhụrụ mmalite, Telegram bụ a mma-guzobere ozi n'elu ikpo okwu na-eji na gburugburu ụwa.
N'ịkpa a Homegrown cryptocurrency nwere ike inye Telegram si ugwo usoro nnukwu onwe ha n'ebe ọ bụla ọchịchị ma ọ bụ akụ - ihe Co-nchoputa na CEO Pavel Durov maara na anyaukwu mgbe investors we ikpeazụ ya ụlọ ọrụ, Russian mmadụ netwọk VK. Durov adịghị zara TechCrunch si ọtụtụ mgbalị ịkpọtụrụ ya banyere nke a akụkọ.
Ike a cryptocurrency n'ime a n'ọtụtụ ebe adiaha ozi ngwa bụ nnukwu.
Na cryptocurrency kwadoro ịkwụ ụgwọ n'ime Telegram, ọrụ ike uzo onyinye ụgwọ mgbe eziga ego gafee mba ala, ịkpali ego naanị ekele ngwa si ezo, anapụta micropayments nke ga-eweta kwa elu nke kaadị ụgwọ, na ndị ọzọ. Telegram bụ ugbua na de facto nkwurịta okwu ọwa n'ihi na ụwa na cryptocurrency obodo, na-eme ka a eke home ka ya mkpụrụ ego ma Blockchain.
Na-ere a ton nke cryptocurrency
Telegram na-ghọtara na-atụle na-azụ ihe dị ka $500 nde ke tupu ICO ire na a nwere ngụkọta iriba uru na nso nke $3 ijeri $5 ijeri. Otú ọ dị, ndị ọnụ ọgụgụ nwere ike ịgbanwe tupu ICO, nke nwere ike-abịa dị ka n'oge na-adịghị dị ka March. Ndị ọnụ ọgụgụ ga-eme ka ọ na ikekwe nnukwu onwe kaadị bulie ụbọchị mgbe Tezos, nke guzo n'elu $230 nde ke July.
A tupu ere ihe ICO bụ a kacha nta okpu on investments (mgbe ụfọdụ na ego) adọta nnukwu investors ('Whales') tupu a wider iriba ire ka retail investors. ọha na eze, retail adọ nke ihe ICO nēche ịkpọlite ​​obere n'ihi na e nwere a ọdụ ogologo nke ndị mmadụ etinye obere echekwara. Ma n'ihu-itinye ICO na institutional ulo oru mbo na-akpali obi ike maka retail investors.
Ndị tupu ire investors nwere ike a chọrọ ebe a kacha nta Buy na-nke $20 nde ma ọ bụrụ na ha na-na mpụga nke Durov si n'ime gburugburu. Isi mmalite na-ekwu na ICO ga-achọ n'ezie fiat ego dị ka US dollar Buy-na, bụghị Bitcoin ma ọ bụ Eta dị ka ndị ọzọ ICOs nwere ụbọchị.
Top-EBIONITISM institutional ego sịrị kwuputela mmasị, ma Durov kwuru na na-nọgide na-anabata ha ego. Otu ike nụrụ kepu kepu na kewapụrụ maka a tupu ire oke bụ Mail.Ru Group (n'oge gara DST), tọrọ ntọala site Russian emigre Yuri Milner. A ọnụ na-ekwuchitere DST emeghị zaghachi anyị ase banyere akụkọ a. na-akpali mmasị, Mail.Ru Group bụ ego na bịara ịzụ Durov ikpeazụ ụlọ ọrụ VK.
Ịghọta Telegram Open Network
Durov echiche bụ ẹkedori ihe kpamkpam ọhụrụ blockchain, na iji Telegram si 180 nde ọrụ dị ka rọketi mmanụ ụgbọala na ike na-atụ n'ime mainstream doo anya cryptocurrency na-eme Telegram, n'ụzọ dị irè, a kingmaker nke ọzọ cryptocurrencies, n'ihi na nke ẹdude ọnụ ọgụgụ.
Dị ka Telegram si-acha ọcha akwụkwọ na TechCrunch nwere review akụkụ, ya cryptocurrency ga-akpọ "gram" na ike nwere ike nweta ozugbo mainstream doo site na kegide Telegram si chat ngwa.
Isi mmalite na-ekwu Durov kpebiri ikpokọta ma a centralized na decentralized akụrụngwa, kemgbe a kpam kpam decentralized netwọk anaghị n'ọtụtụ dị ka ngwa ngwa dị ka onye nke nwere ụfọdụ ọcha nke centralization, n'ihi ya mere telegram kwesịrị nwere ya blockchain.
Na-akpụ akpụ a decentralized blockchain ikpo okwu nwere ike igbu nnụnụ abụọ na otu nkume Telegram. Nakwa dị ka na-eke a na-fụọ cryptocurrency aku na uba n'ime ngwa, ọ ga-ikpuchi ya megide ọgụ na ebubo mba-ekwu dị ka Iran, ebe ọ na-now akụkọ ihe 40% nke Iran si internet okporo ụzọ ma e nwa oge egbochi n'etiti mba ngagharị iwe megide ọchịchị.
Telegram keere a siri na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ike omume na-agbalị na-ejigide ya ọrụ na mba, mechisịrị ọnụ ala ụfọdụ ọwa nke na-akpọ maka ọdịda nke ndị ọchịchị, mgbe idebe ndị ọzọ na-emeghe.
WeChat Ma na kaadị
na ton, Telegram Aims ịzụlite cryptocurrency dabeere na ịba uru akin ka WeChat, nke ka blossomed n'ime ihe karịrị a chat ngwa na-eme dị ka ndabere na ugwo usoro n'ihi na ọtụtụ na China.
Mgbe ịkwụ ụgwọ nwere ike ngwa ngwa na WeChat maka a dịgasị iche iche nke ọrụ, usoro na-anọgide nnọọ centralized. A decentralized n'elu ikpo okwu dị ka ton nwere ike na-enye nchebe na resilience.
Isi mmalite na-ekwu na Telegram ezube ekwe ka ndị ọrụ na-jide ma Telegram si ego na fiat ego na a forthcoming wallet.
E nwekwara ndị na-achị Mmepụta ilekota Telegram emeworo gburugburu ya, ebe bots na ọrụ na-awa site-atọ ndị ọzọ na mmepe. ọzọ, ebe a ton ike, na ozizi, underly ihe niile a Mmepụta na-Telegram.
na a 132 page-acha ọcha akwụkwọ, Telegram ka depụtara a anọ na-ogbo plan:
"Ton Services" ga-abụ a ikpo okwu maka atọ ndị ọzọ ọrụ nke ụdị ọ bụla nke na-enyere ama dị ka enyi na enyi ihu maka decentralized ngwa ọdịnala na smart contracts.
"Ton DNS" bụ a ọrụ n'ihi na-ekenye mmadụ-ogugu aha akaụntụ, smart contracts ọrụ na netwọk ọnụ. Na ton DNS, ịnweta decentralized ọrụ pụrụ ịdị ka "ị na-elele a website na World Wide Web."
"Ton ịkwụ ụgwọ" bụ a ikpo okwu maka micropayments na a micropayment ọwa netwọk. Ọ Aims ga-eji "ntabi anya-yinye uru enyefe n'etiti ọrụ bots na ọrụ ndị ọzọ". Echebe wuru n'ime usoro na-iji hụ na a na-enyefe "dị ka ala dị ka on-yinye azụmahịa".
The "ton Blockchain" ga-iso nke a ukwu yinye na 2-na-na-na ike-nke-92 soro blockchains. Ya kasị dị ịrịba ama akụkụ bụ na ọ ga-enwe "enweghị njedebe Sharding paradigm" iji nweta scalability. N'ihi ya, Ton blockchains ịhụ na-enwe ike "na-akpaghị aka kewaa ma jikota ịnabata mgbanwe ibu". Nke a ga-apụta ọhụrụ nkanka na-eme ngwa ngwa na "enweghị ogologo queues enyere aka na azụmahịa na-efu ala, ọbụna ma ọ bụrụ na ụfọdụ n'ime ndị ọrụ na-eji ikpo okwu na-massively-ewu ewu ".
Ọ ga-iso nke "ntabi Hypercube nsochi usoro" e mere otú ahụ ka blockchain nwere ike ịnọgide na-enwe top ọsọ ọbụna dị ka ọ na-etolite. Ya àmà nke eto obibia ga-eru na otutu mmadu kwenyere site a variant nke 'Byzantine nsogbu anagide' protocol, ọzọ na-amụba ọsọ na arụmọrụ. Na ya ga-eji 2-D ekesa Ledgers. Nke a pụtara na ton nwere ike na-eto eto ọhụrụ nti nkanka on top nke ọ bụla nkanka na na pụtara ịbụ na-ekwesịghị ịdị na-ezere ihe ọ bụla na-enweghị isi ndụdụ. Yabụ, Ton Aims na-'onwe-ọgwụgwọ'.
Ton nke atọ na ọgbọ blockchain ga-dabere na a na-akpa ike 'àmà nke eto' nwetara site na otutu ọzọ na a elu ogo kpatara ndidi. Ọ ga-aka nchekwa nke ID, ịkwụ ụgwọ na smart contracts. Ya mere, kama ịdabere àmà nke na-arụ ọrụ ike ya ego, Telegram ga-adabere na a ọhụrụ, obere ume-hogging ụzọ nke na Ngwuputa cryptocurrency karịa mbụ Bitcoin usoro.
The na-ekwu bụ na ọ ga-eru nke a karịrị nnọọ ọnụ ọgụgụ nke azụmahịa, gburugburu 1 nde kwa abụọ. Yabụ, yiri oké ọchịchọ nke Polkadot oru ngo nke Berlin - ma na ihe arụnyere isi nke 180 nde mmadụ. Nke a na-eme ka ọ na-'interchain' a na-akpọ 'na-akpa ike sharding'.
The-acha ọcha akwụkwọ na-eme ka o doo anya na anọ percent nke ọkọnọ nke gram (200 nde gram) ga-debeere Telegram mmepe otu na a afọ anọ vesting oge. Telegram nwekwara ezube ejigide "dịkarịa ala 52 percent "nke dum ọkọnọ nke gram cryptocurrency iji chebe ya ada trading ma na-enwe mgbanwe. Nke fọdụrụ 44 percent ga-eresị ma ọha na onwe ire.
The ego ga-depụtara na mpụga mgbanwe na-eji n'ime Telegram ngwa.
Oge-maara ihe, mbụ nkeji iri na ise nke afọ a ga-ahụ egbe nke Telegram Mpụga Secure ID, esochi MVP nke ton. The egbe nke Telegram obere akpa a na-slated maka Q4 2018, na ihe e kere eke nke ton dabeere na aku na uba ike ẹkedori na Q1 2019. The ike nke ton Services ga-eso na Q2 2019.
Ụfọdụ na kaadị obodo ịnọgide obi abụọ nke ton. "M dị na-eche na nke a bụ CEO si monetizing Telegram, ihu ọma,"Na-ekwu Jackson Palmer, nchoputa nke n'oge cryptocurrency Dogecoin.
A isi iyi techcrunch.com
South Korean amaala ...
New nnyocha akwụkwọ s ...
Previous Post:Blockchain News 8 January 2018
Next Post:Blockchain News 9 January 2018